Duufaanta “Irma” oo bur-bur baahsan ku reebtay dalka Cuba: SAWIRRO
Dalkaasi Cuma oo ay shalay ku dhufatay duufaanta Irma ayaa waxaa ay ku reebtay saameyn ballaaran oo u badan bur-bur hanti. Waxaa qeybo badan oo dalka ah ka maqan korontada, waxaa xiran oo ay biyo fadhiyaan waddooyinka iwm.
by calanka —	September 10, 2017 —	Sawirro
Madoonna oo isbitaal casri ah ka furtay waddan ku yaal Afrika: SAWIRRO
Heesaayadda caanka ah ee reer Mareykan Madonna ayaa dalka Malawi waxa ay ka furtay isbitaal ay iyadu maalgelisay kaas oo loogu magac daray mid ka mid ah wiilasha ay soo korsatay Mercy James hospital. Madonna ayaa isbitaalkan ka hirgelisay deegaanka Blantyre ee dalkaasi Malawi.
by calanka —	September 9, 2017 —	Sawirro
US: Shacabka magaalada Houston oo guryohooda ku bilaabay dayactir kaddib duufaantii Harvey: SAWIRRO
Shacabka magaalada Houston ee gobolkaasi Texas ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ay ku bilaabeen guryohooda dayactir kaddib markii ay saameyn baahsan ku reebtay duufaantii Harvey. Inta badan guryaha magaalada ayay biyo fariisteen.
by calanka —	September 8, 2017 —	Sawirro
Daawo sawirrada saameynta ay duufaanta Irma ku reebtay jasiiradda Saint Martin: SAWIRRO
Duufaanta Irma oo garaaceysa qaaradda Mareykanka ayaa waxaa ay kusoo dhufatay jasiirado yar-yar kuwaas oo ay saameyn ba`an ku reebtay. Jasiiradahaasi ayaa waxaa ka mid ah jasiiradda Saint Martin oo hoos tagta dowladda dalka Holland.
by calanka —	September 7, 2017 —	Sawirro
Ciidamada Myanmar oo maalmo gudeheed waddanka uga saaray 123 kun oo muslimiin ah: SAWIRRO
Waddanka Myanmar ayaa waxaa maalmahan ka socday barakac loo geysanayo qowmiyadda muslimiinta ah ee loo yaqaan Rohingya, waxaaxana dowladda dalkaasi ay ku fasaxday ciidamadeeda oo dadkaasi ka dhigay wax ay dilaan iyo wax ay ceyrsadaan.
by calanka —	September 6, 2017 —	Sawirro
Qaabkee ayuu u dhacay dagaalka yaanyada ee sannadkan?: SAWIRRO
Magaalada Bunol ee u dhow Valencia, Spain ayaa waxaa sannad walba lagu qabtaa dagaalka yaanyada oa isku garaaco taas oo dhaqan ayaa dalkaasi caan ka ah.
by calanka —	September 3, 2017 —	Sawirro
Maxaad kala socotaa qaabka ay muslimiinta u guteen sannadkan xajka iyo jawiga sida uu ahaa: SAWIRRO
Sannadkan waxaa malaayiin muslimiin ah ay u guteen xajka si habsami leh, iyadoona wali tiro kor u dhaafeysa 400 oo kun oo xijey ah ay dowladda Sacuudiga dib ugu celisay dalalkooda sababo la xiriira waraaqohooda oo aan dhameystirneyn.
by calanka —	September 2, 2017 —	Sawirro
Kuuriyada Waqooyi oo u dabaaldegtay natiijada gantaalkii ugu dambeeyay ee ay ridday: SAWIRRO
Dowladda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldagtay guusha natiijada gantaalkeedii ugu dambeeyay ee ay ridday kaas oo kor maray dalka Japan. Gantaalkan ayaa waxaa ka qeyliyay dowladda kasoo horjeeda Waqooyiga Kuuriya ee uu Mareykanka kow ka yahay.
by calanka —	August 30, 2017 —	Sawirro
Ilaalada Secret Service oo Donald Trump u ilaalisa si ka duwan madaxdii ka horreysay: SAWIRRO
Secret Service oo ah booliska ilaaliya madaxda Mareykanka ayaa sannadkan waxa ay ka cabanayaa dhaqaale saa`id ah oo ku baxa howshooda tan iyo sidii loo doortay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Waxaa ay sheegeen in uu labo jibaar ku dhow yahay qarashka ku baxa ilaalinta Trump.
by calanka —	August 29, 2017 —	Sawirro
Daawo sawirrada burburka duufaanta Harvey u geysatay gobolka Texas, Mareykanka: SAWIRRO
Gobolka ugu weyn dalka Mareykanka ayaa waxaa ku dhufatay duufaan ay ku magacaabeen Harvey taas oo khasaare naf iyo maalba u geysatay gobolkaasi. Waxaa ay sidoo kale daadad fariisisay magaalada.
by calanka —	August 28, 2017 —	Sawirro